Kylian Mbappe Oo Ka Jawaabay Telefoonkii Uu Jurgen Klopp Kula Hadlay Abbihii & Sidii Ay Layaabka Ugu Noqotay - Gool24.Net
Kylian Mbappe Oo Ka Jawaabay Telefoonkii Uu Jurgen Klopp Kula Hadlay Abbihii & Sidii Ay Layaabka Ugu Noqotay
Weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappe ayaa layaabay in tababaraha Liverpool ee Jurgen kLopp uu khadka telefoonka kula hadlay aabbihii oo uu u sheegay inuu doonayo inuu la saxeexdo wiilkiisa, isaguna uu qayb ka qaato sidii uu uga caawin lahaa inuu ku qanciyo in uu Anfield u wareego.
Liverpool ayaa si aad ah loola xidhiidhiyey inay samayn doonto saxeexii ugu saamaynta badnaa, haddii ay Real Madrid ka qaadato Sadio Mane, kaas oo lacagta ay ka hesho iyo qasnaddeeda oo ay dib ugu noqoto ay u adeegsan doonto Kylian Mbappe oo qiimahihiisa lagu sheegay illaa £250 milyan oo Euro.
Tababare Jurgen Klopp waxa uu qorshaynayaa in awoodda Liverpool aanay hoos uga soo dhicin halka ay taagan tahay, xili ciyaareedka dambena uu ahaado mid sida kan oo kale ay dhibco badan ugu guuleysan karaan horyaalka.
Mustaqbalka Sadio Mane oo walaac ku haya ayuu rumaysan yahay in haddii uu ka tago ay hoos u dhici doonto oo ay waayi doonaan cudud weyn oo shaqo badnaydn, sidaa darteedna waxa uu Kylian Mbappe ka dhigayaa bartilmeed ka waxqabad fiican Mane oo saxeexiisa uu ku argagax gelin karayo naadiyada kale ee Premier League, horyaalkana aan lagu qabsan karaynin fasal ciyaareedka soo socda.
Sida uu qoray Le10sport, tababare Klopp waxa uu hore telefoon ugula xidhiidha Wilfried oo ah aabbaha Mbappe waxaanay falanqeeyeen sida uu wiilkiisu u tegi karayo Liverpool, laakiin ma sheegin haddii ay meel isla dhigeen inay ka wada shaqeeyaan arrintan iyo haddii kale.
Isla wargeyska daabacay warka hore ayaa waxa uu haddana soo helay jawaabta uu Kylian Mbappe ka bixiyey wada-hadalka dhex-maray aabbihii iyo Jurgen Klopp, waxaanu ku tilmaamay ‘wax lala yaabo’.
Inkasta oo aanu odhaahyo rasmi ah oo uu bixiyey Mbappe daabacaaddiisa ku sheegin, haddana waxa kaliya ee uu xusay in ‘amakaag’ ay ku noqotay in tababaraha Liverpool uu la xidhiidho aabbihii.